စိတ်ကူးပုံရိပ်: July 2007
ကိုယ် လန့်နိုး ခဲ့ပြီ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:467comments: Links to this post
လေတချက် အသုတ်မှာ ကိုယ်အနွေးထည် ဇစ်ကိုဆွဲတင်ရင်း တင်းတင်းစေ့ထား မိသည်။
မှောင်ရီပျိုးနေသော ကောင်းကင်အောက်မှာ ငှက်များအုပ်လိုက် ပျံသွားနေကြသည်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့ အသံက ဆူညံလွန်းနေသည်။
ကိုယ့်ဖိနပ်အောက် မှာပြားသွားကြသော မြက်ပင်များကို ကိုယ်မသနားမိ။
မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအောက်သို့ နေလုံးကြီးဝင်သွား သည်ကို ကိုယ်ငေးကြည့်နေမိသည်။
ပင်လယ်အောက်သို့ ငုပ်လျှိုးသွားသော၊ တောင်စွယ်အောက် မှာပျောက်ကွယ်သွားသော နေ၀င်ချိန်များကို ကိုယ်နှစ်သက်စွာ ခံစားခဲ့ဖူးသည်။
ကြည့်စမ်း… စွမ်းအားကြီး ပါတယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝတရား ကြီးတောင် အတက်အကျ၊ အလှည့်အပြောင်းတွေ နဲ့။
ကိုယ့်ဘ၀က ဘဘာဝကြီးနဲ့ စာရင်သေးငယ်လွန်း ပါတယ်။
နှိုင်းစာလိုက်ရင် ကိုယ်ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ မပြောပလောက် တော့ပါဘူး ကွယ်….
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပြောတာ သတိရမိသည်။
ဘာတွေပဲ ဖြစ်နေနေ၊ ကမ္ဘာကြီး မပျက်သေးပါဘူး တဲ့။
ဟုတ်တယ်လေ… ကိုယ်ဟာ တနေ့မှာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီး နောက်တနေ့မှာ သူတောင်းစားဖြစ်နေလည်း လောကကြီးက လည်ပတ်နေမှာပါ။
ဘာမှ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲ မရှိပါဘူး။
မလုပ်ချင်တာများကို လွှတ်ချခဲ့ရလျှင် ကိုယ်လက်ချည်း ဗလာသာပြန်ရ မည်လား။
အဲ.. ထမင်းလည်း ငတ်မည်ပေါ့။
ခက်တာက ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ ကိုလည်း အတိအကျ မသိ။
ဒီလမ်းကလွဲလို့ ဘယ်လမ်းကိုမှ ကိုယ်မသိခဲ့။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ဆိုသော စည်းကမ်းတွေ ကလနားတွေ ကြောင့် ကိုယ်ရွေးခဲ့ မိသည်လား။
ရွေးချယ်မှုတိုင်း ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ တာဝန်တွေ တသီကြီးပါလာ တတ်တာကိုး။
ရွေးချယ် စရာမရှိလို့ဟု အကြောင်းပြပြီး လမ်းရိုးအတိုင်း လျှောက်ရသည် မှာသက်သာသည်။
ကိုယ်မဲ့ပြုံး ပြုံးမိသည် ထင်သည်။
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကို ကိုယ်မသိချင်ပါ။
အဘိဓာန်တစ်အုပ် မှမဟုတ်ဘဲ လေ…
ကိုယ်ဘာကြောင့် ရှင်သန်နေတယ်ရယ် လို့အကြောင်းပြချက် လိုလို့လား။
မေတ္တာတစ်ခု သက်သက်အတွက် ရှင်သန်လို့ မရဘူးလားကွယ်….
ကိုယ့်အတွက် ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှု မလိုပါဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀သည် သူတပါးအဆုံးအဖြတ်မှာ တည်ခဲ့ဖူးသည်။
သူတပါးဆန္ဒနှင့် ကိုယ်အသက်ရှူဖူး ခဲ့သည်။
အရေးမကြီးသော အရာတချို့ကို အရေးတကြီး လုပ်ခဲ့ရဖူးသည်။
အရေးကြီးသော လူတချို့ကို လည်းအရေးမကြီး သလိုထားခဲ့ဖူးသည်။
နောင်တဆိုတာ ကိုယ်သိပေမယ့် နားမလည်ခဲ့….
ရှေ့မှာမြင်နေ ရတာ လမ်းကလေး တစ်ခု…
မှောင်နေတော့ လမ်းဆုံးကို မတွေ့သေး။
ဆက်လျှောက် ရဦးမည် ပေါ့။
အဝေးမှ သီချင်းသံ သဲ့သဲ့ကြားနေ ရသည်…..
“မရေရာဘူး…. မသေချာဘူး….. မပြီးဆုံးဘူး…
မသေချာဘူး.. မရေရာဘူး.. မမြဲနေဘူး…
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 07:073comments: Links to this post
ပုံရိပ် တစ်ယောက် ဘလော့ဂ်မရေးတာ ကြာလို့ မရေးတတ်တော့ ပါ။ အရှိန်ယူနေ ပါသည်။ သည်းခံပြီး စောင့်ဖတ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း များရေ... စောင့်လက်စ နဲ့ဆက်စောင့်ကြပါနော်။ နောက်နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်.... :D
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 19:432comments: Links to this post
တကယ်တော့ ပုံရိပ် ဘလောက်ရေးခြင်းမှ ခဏအနားယူ သင့်တာကြာပါပြီ။ သံယောဇဉ် မပြတ်နိုင်တော့ ခက်တာပေါ့လေ။ မလုပ်မနေရ အလုပ်တစ်ခုကို အပြီးသတ်ရ မှာမို့ ခဏတာ အနားယူလိုက် ပါဦးမည်။ ဒီကြားထဲ သိပ်ပြီး ပြန်လာချင်လွန်းရင်တော့ ပြန်လာကြည့် ပါမယ်။ ပေါ်လိုက်ပျောက် လိုက် ပေါ့။ ပို့စ်ကတော့ မတင်နိုင်ဘူးပေါ့။ ပုံရိပ် ပြန်လာမှာပါ။ လာလည်၊ လာဖတ်ကြတဲ့ မောင်နှမများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 06:555comments: Links to this post
မဂျစ်ရဲ့ နှိုးဆော်မှုနဲ့ ဆံပင်ဆိုးကြမယ် ဆိုတဲ့ Blogger မောင်နှမများ နဲ့ မဂျစ်အတွက် "ဆံပင်ဆိုးကြသူများ"
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:314comments: Links to this post
မိုးတစိမ့်စိမ့်။ ဂျူလိုင်မိုးသည် စဲခဲလှချေ၏။ ၀ရန်တာမှာ ရပ်နေသော ကလေးငယ်သည် မိုးစက်ကလေးများကို ငေးစိုက်ကြည့်နေသည်။ သူ့အတွက်တော့ မိုးစက်ကလေး များ ခုန်ဆင်းလာပုံမှာ ပျော်စရာ။ အိမ်ရှေ့ ၀ရန်တာမှာ ခါတိုင်းနှင့် မတူသော အရာတစ်ခုရှိသည်ကို သူသတိမူမိပြီ။ ၀ါးလုးံရှည် တစ်ချောင်း၏ အလယ်တွင် ချည်နှောင်ထားသော အလံတစ်ခု။ မေမေချည်ထားတာ ထင်တယ်။ မိုးစို နေသော သံမံတလင်းပေါ် သူခြေချကာ အလံကို အနားတိုး၍ ကြည့်သည်။ မေမေက မိုးရေထဲ မထွက်ရဟု ပြောထားသည်ကို သူမေ့ပြီ။ အလံသည် မိုးရေကြောင့် လေထဲမှာ လွင့်နေရမည့် အစား ၀ါးလုံးမှာ ကပ်၍နေသည်။ သူ အလံကို မြင်လိုလှသည်မို့ အနားတိုးကပ်ကာ ဖြန့်ရန်ကြိုးစားသည်။ အရပ်က မမီသည်မို့ ၀ရန်တာလက်ရန်းကို စ၍တွယ်တက် မိသည်။
“သားရေ.. ဘာတွေလုပ် နေတာလဲ”
မီးဖိုထဲမှ မေမေထွက်လာပြီ ထင်သည်။ ကလေးချက်ချင်း သတိရသွားပြီး ပြန်ခုန်ဆင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ မေမေရှိရာသို့ သူပြေးဝင်လာ၏။
“သား မေ့သွားလို့ မေမေ။ မိုးရေထဲ လည်းမထွက်တော့ပါဘူး။ ၀ရန်တာပေါ်လည်း မတက်တော့ပါဘူး။”
စည်းကမ်းဖောက်သော သားသည် မေမေ့ရှေ့မှာ ခံဝန်ကတိတွေ ပေးနေမိသည်။ စည်းကမ်းဖောက်သော သားကို မေမေ စိတ်ဆိုးဟန် မတူ။
“သားက ဘာလုပ်မလို့ ထွက်တာလဲ”
မေမေ လေအေးလေးနဲ့ မေးတော့သား ပြုံးလာသည်။
မေမေ အိမ်ရှေ့ကို ထွက်ကာ အလံကို ဖြန့်လိုက်သည်။ အလံသည် မိုးပေါက်တို့တစက်စက် ဖြင့်ပြန်.ကား၍ လာသည်။ လေတစ်ချက်ဝေ့လိုက်တော့ အလံကို သားကောင်းကောင်း မြင်နေရပြီ။
“အလံက ဘာလုပ်တာလဲ ဟင်”
မေမေသည် ပြုံး၍သားကို ဖက်သည်။ ပြီးတော့ လက်တွဲကာ စာအုပ်စင်သို့ ခေါ်လာ၏။ စာအုပ်စင် ပေါ်မှစာအုပ်ထူထူ တစ်အုပ်မေမေ့ လက်ထဲမှာ။ သားမမီ့ တမီဖြင့် ခုန်၍စာအုပ်ကို ကြည့်သည်။ သား စာမဖတ်တတ်သေးတော့ နားမလည်ပါ။ မေမေက သားကိုဓာတ်ပုံ တချို့ပြသည်။ ထိုဓာတ်ပုံထဲမှ လူတစ်ဦးစီ အကြောင်းမေမေ ပြောပြသည်။ သူတို့က ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ တဲ့။ သားတို့ နိုင်ငံကို ဟိုးတုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေက အနိုင်ကျင့်ဖူးသည်။ အနိုင်ကျင့်တယ် ဆိုတာ သားက ကြောင်ကလေးကို ရိုက်သလိုလား ဆိုတော့ မေမေက အင်းတဲ့။ ဘယ်ကောင်းမလဲ ဟုသားက ပြန်ပြောတော့ မေမေရယ်သည်။ အဲဒီလို အနိုင်ကျင့်တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေကို ဒီခေါင်းဆောင် ကြီးတွေက ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ထုတ်တာတဲ့။ ရမ်ဘိုလို တစ်ယောက်ထဲ ချတာလား မေမေဟု သားက အထွန့်တက်ပြန်သည်။ မေမေက ပြုံးပြန်၏။ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး သားရဲ့။ တနိုင်ငံလုံး မှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံးပေါ့။ စုပေါင်းပြီး တိုက်ကြတာ။ ဒီခေါင်းဆောင်ကြီး တွေက လမ်းပြပေးတာပေါ့။ သားအထင် ကြီးသွားသည်။ ဒါဆို သားလည်း ပါမယ် ဟုပြောတော့ မေမေသားကို နမ်း၍ ပြောသည်။ ခုအင်္ဂလိပ်တွေ မရှိတော့ဘူး သားရဲ့။ မေမေတို့ လွပ်လပ်ရေးရပြီ လေ။
မေမေဆက်ပြောသည်ကို သားအငေးသား နားထောင်နေမိသည်။ ဒါပေမယ့် သားရယ် အဲဒီလို သူများတွေ အတွက်အကျိုးဆောင် ခဲ့တဲ့၊ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို လူတချို့က သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ကြတယ်။
ဟာ….. သားရင်ထဲမှာ ဟာ၍ သွားသည်။ အဲဒီလိုကောင်းတဲ့ လူတွေကို ဘာလို့သတ်ပစ်ကြတာလဲ။ မေမေမျက်နှာတည်၍ သက်ပြင်းချသည်။ လူကောင်းတွေကို လူတိုင်းက မကြိုက်ဘူးလေ သားရယ်။ သားကြီးရင် နားလည်လာမှာ ပေါ့။
ဒီအလံက ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ အထိမ်းအမှတ်၊ သားနားလည် အောင်ပြောရင် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အသတ်ခံရပြီးနောက် လူတွေ အမြဲတမ်း သတိရနေတဲ့၊ ၀မ်းနည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပေါ့။ သား ဘာလုပ်ပေးလို့ ရလဲဟင်ဟု မေးတော့ မေမေက သားလေး လိမ္မာရမယ်။ မဟုတ်တာ မမှန်တာ မပြောရဘူး၊ မတရားတာ မလုပ်ရဘူး၊ သူတပါးကို အနိုင်မကျင့်ရဘူး။ ဒါတွေဟာ ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ဆုံးမခဲ့တာပဲ။
ဟော ခဏကြာရင် ဥသြဆွဲ လိမ့်မယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ သူတို့ကျဆုံးခဲ့တာ ပဲ။ သားလှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။ သားတို့ သွားကယ်ကြမယ်လေ။ သားရယ်၊ မေမေရယ်၊ ဖေဖေရယ်။ မေမေကရယ်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အကြာကြီး သားမမွေးခင်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ ကြာခဲ့ပြီ သားရဲ့။ ခုတော့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့ပဲ သတိရကြရ တော့တာပေါ့။ ဥသြဆွဲရင် သားစိတ်ထဲမှာ သူတို့ကို မှန်းဆပြီး မြင်ကြည့်ပေါ့။ မေမေ့ လက်ထဲမှ စာအုပ်ကို သားလှမ်းယူ လိုက်သည်။ သားသူတို့ပုံကို မှတ်မိအောင်ကြည့်မယ် နော်။ တစ်ယောက်က ကတုံးလေးနဲ့ သားနဲ့တူတူပဲ။ တစ်ယောက်က ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးနဲ့။ ဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ တူတယ်နော်။ အားလုံးက သတ္တိရှိကြတဲ့ ပုံပဲနော်။ သားက တစ်နှစ်သုံးလေး တော့တတ်ပြီမို့ ရေတွက်ကြည့်နေသည်။ တစ်၊နှစ်၊ သုံး၊ လေး…….ကိုး။ ကိုးယောက် ပေါ့နော် မေမေ။ မေမေ ခေါင်းညိတ်သည်။
ဥသြဆွဲ သံကိုကြားရပြီ။ သားငြိမ်ငြိမ်လေး မေမေ့ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေလိုက်သည်။ မေမေရှိုက်နေ သလိုပဲ။ မျက်စိထဲတွင် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို သားမြင်ကြည့်နေသည်။ အားလုံးတိတ်သွားတော့ သားမေမေ့ကို လှည့်ကြည့်သည်။ မေမေက ပြောသည်။ သားဒီလိုပဲ နှစ်တိုင်းသတိရ ရမယ်နော်။ သား ခေါင်းကို အခါခါညိတ်မိသည်။
သား ကတိကိုမေ့ပြီး မိုးရေတွေနဲ့ ၀ရန်တာဘက် ပြေးထွက်လာပြန်ပြီ။ အလံတွေ အလံတွေ ရဲရဲနီနေသည်။
မိုးတွေရွာ နေပြန်ပြီ မေမေ။ ကျွန်တော်ဟာ မိုးရေထဲကို ထွက်လို့ရပြီ။ ကျွန်တော့်အရပ်က ၀ရန်တာ လက်ရန်းကိုကျော်လို့ မိုးနေပြီ။ ဒါပေမယ့် အလံဘယ်မှာလဲ မေမေ။ အနီရောင် တစွန်းတစကိုမှ ကျွန်တော် မတွေ့ရ ပါလား။ ရဲရဲနီ နေသင့်ပြီလေ။ မိုးရေတွေ စိုစွတ်နေတဲ့ အလံကို ကျွန်တော်ဖြန့်ပေး မှာပေါ့။ ကျွန်တော်ဟာ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ် နေပါပြီ။ နံနက် ၁၁နာရီ တောင်ထိုးပါပေါ့။ ဘာသံမှ မကြားခဲ့ရပါလား။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာဟာ နေတယ် မေမေ။
မိုးရေထဲသို့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ပြေးထွက်လာသည်။ သူ့လက်ထဲတွင် ၀ါးလုံးရှည်တစ်ချောင်း၊ အလံတစ်ခု။ မိုးပေါက်တို့ တရှိန်ထိုး သွန်ကျလာပြီ။ မိုးဆိုတာ တားလို့ရနိုင်တဲ့ အရာမှ မဟုတ်ဘဲ လေ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:39 8 comments: Links to this post
ပြတင်းပေါက် မှနေရောင် တချို့ တိုးဝင်လာသည်။ မနက်တစ်ခု လင်းပြန်လေပြီ။ အလုပ်သွား ရပြန်ပေဦး ပေမည်။ သာသာတိုက်နေသော လေနှင့် လွင့်နေသော ခန်းဆီးကြားမှ ကိုယ့်အခန်းဘေး ရှိသစ်ပင်ကို မြင်နေရသည်။ ငှက်နီလေး တစ်ကောင် သစ်ပင်ပေါ်မှာ နားနေသည်။ ခေါင်းကို ငဲ့လိုက်၊ အမြီးကို ရမ်းလိုက်နှင့်။ ကျီကျီကျာကျာ အော်နေသော ငှက်သံလေးများ နားထောင်ရင်း နှိုးလာရသည်ကို ကိုယ်သဘောကျသည်။ ခဏနေတော့ အငြိမ်မနေနိုင်သော ငှက်ကလေး ထပြန်သွား၏။ သစ်ရွက်စိမ်းတို့ တဖျတ်ဖျတ် ကျန်ရစ်သည်။ သစ်ကိုင်းတို့ ကြား နေရောင်တို့ တွေလှိုင်းထနေသလို။ ခုမှပင် သတိထားမိသည်။ ဒီအရွက်တွေက ကင်ပွန်းရွက် လိုလို။ မေမေ ချက်သော ကင်ပွန်းရွက် ဟင်းချိုကို သတိရမိသည်။ ညီမလေးနဲ့ ကိုယ်က ကင်ပွန်းရွက် ဟင်းဆိုလျှင် ခေါင်းမဖော်တမ်း။ ညီမလေး ဒီနှစ်ဆယ်တန်း ရောက်ပြီ။ စာတွေမှ ကျက်ရဲ့လား မသိ။ ညီမလေးက စာဆို အင်မတန်မုန်းတာ။ ကိုယ်ဆယ်တန်းတုန်း ကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ စာဆိုတာ ကျက်ရကောင်း တယ်ရယ်လို့ မထင်။ အလွတ်အော်ကျက် ခဲ့ရသော ပထ၀ီတွေကို မုန်းတယ်။ သမိုင်းက ခုနှစ်များ မမှတ်မိ။ ဓာတုဗေဒက ညီမျှခြင်းများ ကဘာတွေမှန်း မသိ။ အောင်ပြီးမှ သာလိမ္မာသင့် ကြောင်းအသိတရား ရတာပေါ့။ အသိတရားဆိုတာ နောင်မှရတတ် တာပဲဟု ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတတ်သော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို သတိရမိသည်။ သူအခု အိမ်ထောင်ကျ နေပြီလား မသိ။ အသိတရား ကိုနောင်မှရ နေရင်တော့ ဒုက္ခ။
ကိုယ့်အဖို့တော့ တစ်ယောက်တည်း နေရတာသာ ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ချက်ချင် တာချက်။ စားချင်တဲ့ အချိန်စား။ မေမေ့ လက်ရာများတော့ စားချင်သား။ မေမေက ဟင်းချက်သင် ဖို့ပြောတိုင်း ကိုယ်ထွက်ပြေး မိတာကို နောင်တရ ချင်သယောင်ယောင်။ ဒါပေမယ့် မေမေက ဘွားလေးလောက် ဟင်းချက်မတော်။ ဘွားလေးရှိ သောနယ်မြို့ လေးကို ခဏခဏသွားစား ဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်။ ဘွားလေးနှင့် အတူနေသော ကိုယ့်ညီမ ၀မ်းကွဲလေးများ နှင့်အစ်ကို က တော့ကံကောင်း ရှာတာပေါ့။ ငယ်ငယ်တုန်းက သူတို့ဆီ သွားရင် ကန်ဘောင်ရိုး ပေါ်စက်ဘီး စီးကြသည်။ အစ်ကိုက ကိုယ့်နောက်က စက်ဘီးတွန်း ပေးရင်းပြေးလိုက် ရသည်။ တခါတော့ ကန်ဘောင်က နေကိုယ် လိမ့်ကျတာ တလှိမ့်ခေါက်ကွေး ပဲ။ ဒီဒဏ်ရာက ခုထိကိုယ့် တံတောင်မှာ ရှိသေး။ ကိုယ်က နမော်နမဲ့ နှင့်မို့ ကိုယ့်မှာ ဒဏ်ရာတွေ အများကြီး။ တခါတုန်းက ပန်းဆိုးတန်းနားမှာပေါ့။ ဘတ်စ်ကားပေါ် ကနေ မှတ်တိုင်မရောက်ခင် မီးပွိုင့်မှာ ခုန်ဆင်းဖို့ ကြိုးစားတုန်း အလောတကြီးနဲ့ ကိုယ်ပြုတ်ကျပါရော လား။ ဘတ်စ်ကားက မီးစိမ်းလို့ ထွက်သွားပေမယ့် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လူတွေဝိုင်းလာ ကြတာလေ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ကားပေါ်က ပြုတ်ကျတယ် ဟေ့။ ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။ အရိုးတွေ ဘာတွေများ ကျိုးသွားသလား။ ကိုယ်လည်း ရှက်ရှက်နဲ့ ဒူးပြဲ၊ တံတောင်မှာ အကြီးအကျယ်ပွန်း ကုန်တာကိုတောင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ချည်းဇွတ်ငြင်းပြီး အတင်းထထွက် လာတာပေါ့။ အဲ.. ဒီတုန်းကပဲ။ သူနဲ့ စတွေ့တာ။
ကိုယ်ကတော့ သူ့ကို ဘယ်သတိထား မိနိုင်မှာလဲ။ ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ထူပူနေတာပဲ။ နောက်မှ သူကပြန်ပြော ပြတာ။ ကိုယ့်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် နဲ့ ကို့ယို့ကားယား အချိန်မှာ သူစတွေ့ ခဲ့တယ်လို့ ပြောတော့ ကိုယ့်မှာ ရယ်ရမလို၊ ရှက်ရမလို။ ကိုယ်ရယ်မိတယ် ထင်တာပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထင်တယ်။ ကိုယ်က နန်းကြီးသုပ် တစ်ပွဲ နဲ့သူက လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် နဲ့ပဲပလာတာ တစ်ချပ် မှာပြီး စောင့်နေတုန်း၊ သူက စကားစ လာတာ။ ကိုယ့်ကို ကျောင်းမှာ မဆုံခင် ကတည်းက တွေ့ဖူးတယ်တဲ့။ ပြုံးစိစိလုပ်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်မှာလဲ ပြောလို့ ဆိုတော့မှ သူက ပြောပြတာ။
အတန်းတွေ ပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ်တို့ အဲဒီဆိုင်လေး မှာထိုင်နေကြလေ။ ပြီးရင် သူက ကိုယ့်ကို ကားဂိတ်လိုက် ပို့ပေးမယ်။ သစ်ရွက်တွေ ကြွေနေတဲ့ လမ်းကနေ ရှပ်တိုက်ပြီး လျှောက်ရင်း စကားတွေ ပြောမယ်။ အမယ် သူပြောတဲ့ စကားတွေက ချစ်စကား ကြိုက်စကား မဟုတ်ဘူး။ သူဖတ်ထားတဲ့ ကဗျာတွေအကြောင်း၊ သူ့အတွေးအခေါ် အယူအဆ အကြောင်း။ နေပူရင် မိုးရွာရင်တော့ ထီးမိုးပေးမယ်။ ပြီးတော့ သူက ဆေးလိပ်လဲ အရမ်းသောက် ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ ကိုယ်နဲ့တွဲ တော့မှ ဖြတ်လိုက်တာတဲ့။ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေ ကပြန်ပြောတာပေါ့။ ကိုယ်က ဟုတ်လို့လားလို့ သူတို့ကို မယုံသင်္ကာ ပုံစံနဲ့ ပြန်မေးလိုက် ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ် လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ သူကတော့ ဒါမျိုးတွေ မပြောပေါင်၊ မြုံစိစိနဲ့ ပြုံးနေတတ်တာပဲ။ သူ့အတွက်နဲ့တော့ အချိန် တော်များများ မှာကိုယ်ပြုံးခဲ့၊ ရယ်ခဲ့ရပါတယ် လေ။ ကိုယ်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ကလွဲလို့ပေါ့။ လူချင်းတွေ့ ပြောမထွက်လို့ စာနဲ့ပဲ ပြောပါရစေတဲ့ လေ။ သူ့စာလေးလဲ ခုထိရှိနေတုန်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူရေးထားတဲ့ စကားတွေကို ကိုယ်အလွတ်ရ ပါတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်အတ္တကို လွန်ပြီး မချစ်တတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ငါလည်း ငါ့အတ္တတွေ ရှင်သန်နေတဲ့ ဒီနေရာက ခွာနိုင်လောက်အောင် နင့်ကို လုံလုံလောက်လောက် မချစ်သေးဘူး ထင်ပါရဲ့။ ငါမြန်မာပြည် ကနေ မခွာနိုင်ဘူး။ နင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို လည်း မပျက်ပါစေနဲ့။ ငါလည်း မမျှော်လင့်တော့ ဘူး။ နင်လည်း ဘာကိုမှ မမျှော်လင့် ပါနဲ့တော့။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင် တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ သူ့စာဖတ်ပြီး တော့ကိုယ် အိပ်မပျော် ခဲ့ဘူးလေ။ တစ်ညလုံး ငိုခဲ့ရတာပေါ့။ သူခု ဘယ်များရောက် နေပါလိမ့်။ ဟို တလောက ရောက်လာတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့တော့ သူကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်နေတယ်တဲ့။ ဟောတော့………အလုပ်………ရှစ်နာရီတောင် ခွဲပြီးသွား ပါရောလား။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 09:087comments: Links to this post